Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụghị mgbe ọ bụla ndị mmadụ mere ngagharị iwe ka a na-emere ha ihe ha chọrọ. Dị ka ihe atụ, ndị ọchịchị nwere ike imesi ndị mmadụ ike ma ha mee ngagharị iwe kama imere ha ihe ha chọrọ. N’oge na-adịbeghị anya, onyeisi ala otu obodo fooro ntutu taa na ya ga-echi ndị na-eme ngagharị iwe n’obodo ahụ ọnụ n’ala. Kemgbe ahụ, e gbuola ọtụtụ ndị n’obodo ahụ. Ọ bụrụgodị na e meere ndị mmadụ ihe ha ji maka ya mee ngagharị iwe, nsogbu ọzọ nwere ike ịpụta. N’otu obodo dị n’Afrịka, otu nwoke so chụtuo onyeisi ala ha mechara gwa ndị nta akụkọ na ihe ha hụrụ wee kwado ọchịchị ọhụrụ abụghịzi ihe ha na-ahụ ugbu a.
mailto:?body=Ngagharị Iwe Ọ̀ Ga-akwụsị Mmegbu?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D102013244%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ngagharị Iwe Ọ̀ Ga-akwụsị Mmegbu?